युवा क्रिक्रेटर रोहितका परिवारलाई बधाई लिन भ्याइनभ्याई | Mechikali Daily
युवा क्रिक्रेटर रोहितका परिवारलाई बधाई लिन भ्याइनभ्याई
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: १६ माघ २०७५, बुधबार ०१:२२
नवलपरासी, माघ १६ । क्रिकेटर रोहित पौडेलका बाबु कुमारलाई अहिले छोराको किर्तिमानीको बधाई थाप्न भ्याइनभ्याई छ । बाबुलाई मात्र होइन उनका सबै परिवारलाई रोहितले देशकै नाम उचो राखेको भन्दै बधाई दिनेको ओइरो छ । कसैले आफैँ भेटेर त कसैले फोनबाटै बधाई दिने गरेका छन् ।
नेपाल र युएईबीच जारी एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक पूरा गरेपछि अहिले रोहितको परिवारलाई बधाई थाप्न भ्याइनभ्याई भएको हो । क्रिकेटर रोहितको घर पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका–१४, बुद्धबस्तीमा छ । उनको घर बर्दघाटको टिसिएन चोकबाट करिब ८ कि.मी. दक्षिणमा छ । घर नजिकै भाडामा कोठा लिएर उनका बाबुले ‘बुद्ध हार्डवेयर’ पसल सञ्चालन गरेका छन् ।
रोहितका बाबु भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ । ५ वर्ष अघि जागिरे जीवन छा्ड्नुभएको कुमार आफ्नै गाउँमा आएर हार्डवेयरको पसल सञ्चानल गर्नुभएको छ । छोराको किर्तिमानीबारे प्रश्न राख्दा कुमारका आँखा हर्षले रसाएका थिए । हर्षित मुद्रामा गला अबरुद्ध बनाउँदै कुमारले भन्नुभयो,‘आफ्ना सन्ततिको प्रगति सुन्दा कस्का बाबुआमा हर्षित नहोलान् र ? त्यसमा पनि छोराले देशकै नाम उँचो राखेको छ । हामी छोराको टिमलाई नेतृत्व गर्ने लिडर र प्रशिक्षकलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छौं ।’
रोहितले ५८ बलमा ५५ रन बनाएर कीर्तिमानी कायम गरेका हुन् । २०५९ भदौ १७ गते बुद्धबस्तीमा जन्मेका रोहितले १६ वर्ष एक सय ४६ दिनमा यसअघिको कीर्तिमानलाई तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम राख्न सफल भएका हुन् । यसअघि १९९६ मा पाकिस्तानी खेलाडी शाहिद अफ्रिदी र भारतीय खेलाडी सचिन तेन्दुल्करको नाउँमा कम उमेरमा अर्धशतक बनाउने रेकर्ड थियो । सानैदेखि क्रिकेटमा रुचि भएकाले रोहितले पढाइमा ध्यान नदिएको परिवारको भनाइ छ ।